भालुको रीस खनिया माथि… कति दुःख दिन्छौ दिन पनि? | Afnokura's Weblog
अगस्ट 26, 2013 at 11:19 अपराह्न टिप्पणी छोड्नुहोस्
३५ जना कतार जान लागेका कामदारहरूलाई एयरपोर्टमै अलपत्र पारे । भिषामा लेखिएको भाषा वुझिएन रे । खाडी मुलुक भएकोले अरवी भाषा र अंग्रेजीमा पनि लेखिएको थियो तर उनीहरूले वुझेनन् रे । दुईचार रुपैयाँ दक्षिणा पाएको भए वुझ्थे होला के गर्नु ? सरकारी स्तरवाट नै अव नेपालीमा पनि लेख्नु पर्यो भनेर पहल गर्नुपर्ने भयो । अंग्रेजीमा लेखेर के गर्नु विचराहरूको अंग्रेजी मेरो झम्केपानी अंग्रेजी भन्दा कमजोर छ । नेपाली कर्मचारी महाशयको अंग्रेजी हेर्न यहाँ जानुहोस् ।
बेलायतमा नलेखिएको संविधान छ भन्छन । नेपालमा नलेखिएको नियम छ । जे सुर चल्छ त्यही नियम जमानाको गाउँले काजीको नियमजस्तो । आफुलाई मन परे एउटा नियम मन नपरे अर्को नियम । जसले दुःख पाओस कि सुख पाओस आफ्नो दुनो सोझ्याउन कति माहिर छन हाम्रा कर्मचारी साहेवहरू । हामीले तिरेको करबाट तलव खान्छन् । हामीलाई नै दुःख दिन्छन हैन तिमीहरूले जे गरे पनि हुने हो कि क्याहो नेपालमा ? कुनै निकाय वन्दैन कि क्याहो यिनलाई ठीक पार्न ?
जापानमा नेपाली माथि अज्ञात व्यक्तिले सांघातिक आक्रमण	कत्तिको मेल खाला त अन लाइनको मत सर्वेक्षणले ?